Zeorzia: Fandinihana momba ny Fampianarana sy Fianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2010 19:51 GMT
Mampianatra sy Mianatra miaraka amin'i Georgie Georgia (TLG) dia tetik'asa iray novolavolain'ny Minisiteran'ny Fampianarana sy ny Siansa any Zeorzia (MES) hikendrena manokana ireo olona tompon'ny teny miisa 1000 mahay miteny anglisy ka te hampianatra any amin'ny sekoly any an-toerana mandritra ny taom-pianarana 2010-2011. Ny andiany voalohany amin'ireo mpampianatra ireo no tonga tany an-toerana tamin'ny volana jolay ary manantena ny fanjakana fa hanomboka ny asany avokoa izy rehetra mialoha ny faran'ny 2010.
Anankiray amin'ireny, ny bilaogin'i drew, milaza fa ankoatra ny mpianatra dia maro amin'ireo mponina mipetraka ao amin'ny tanàna lehibe indrindra any an-toerana, Kutaisi, no maniry hianatra teny anglisy.
Tsy voatery hitovy amin'i Drew daholo anefa ny mpampianatra rehetra ka mipetraka any amin'ny tanàna lehibe toa an'i Kutaisi na Tbilisi renivohitra, fa ny sasany nalefa any amin'ny toerana mbola tsy dia mivelatra loatra. Paul Knettle, ohatra, tonga tany Georgie tamin'ny volana aogositra ary mampianatra any Zeda Etseri, tanàna akaikin'i Zugdidi any atsinanana. Manoratra ao amin'ny Floating World, ohatra ilay Amerikana dia toa tafatoetra moramora ihany.
Na izany aza, miresaka zavatra hafa koa ny mpampianatra TLG sasany. Anisan'izany i Neal Zupanic avy any Slovénie izay manoratra ao amin'ny bilaoginy, Georgia On My Mind, mikasika ny resaka fananahana izay mbola mitoetra ho fady any amin'ity firenena ity. Misy mpamaky 200 eo ny bilaogy ary miteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro.
Azo jerena ao amin'ny Dream is Destiny [GE] ny sasany amin'ireo bilaogin'ny mpampianatra TLG, ary koa ao amin'ny The Young Georgians. Ary satria nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps ireny bilaogy ireny, dia mety hanolotra anao zavatra tokana mikasika ny fiainana any Zeorzia.